काठमाण्डौ । यस वर्षको ११.११ अभियानको विशाल सफलता पछि, नेपालको अग्रणी अनलाइन बजार, दराजले वर्षको अन्तिम सेल अभियान दराज १२.१२ को घोषणा गरेको छ। उक्त अभियान २७ मंसिर मध्यरात देखि ३ पुष (१२ देखि १८ डिसेम्बर) सम्म हुनेछ । १२.१२ मा दराज उपभोक्ताहरुले विशेष छूट्का साथ भाउचरहरू, र बैंक कार्ड मार्फत थप छूट्को लाभ उठाउन सक्नेछन् । यस अभियानको लागि,...
के तपाइँ आफ्नो लेखलाई घर बसी–बसी कमाउने माध्यम बनाउन चाहनुहुन्छ ? त्यो पनि लाखौँमा ! त्यसो भए आजैबाट लेख्न थाल्नुहोस्। अनलाइनका माध्यमबाट तपाइँ आफ्नो लेखलाई नगदमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेटको पहुँच, फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालले पाठकसम्म लेख पुग्ने सहजता तथा गुगल एडसेन्सलगायतका विज्ञापनदातासँग सहजै जोडिन सकिने कारणले...
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले परम्परागत तामाको तारबाट चल्ने ल्याण्डलाइन टेलिफोनलाई एफटीटीएच अर्थात फाइबर टु द होम सेवाले विस्थापित गरी भ्वाइस तथा डाटा सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । कम्पनीले निकट भविष्यमै यही सेवामार्फत टेलिभिजन सुविधा समेत उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेकाले यस सेवाप्रतिको आकर्षणमा निरन्तर वृद्धि हुने देखिन्छ । विद्युत...
काठमाण्डौ। रेडमीले आफ्नो रेडमी नोट ९ सिरिजको नयाँ स्पमार्टफोन आउँदो बिहीबार लन्च गर्दैछ। लन्चअघि नै रेडमीका प्रमुख व्यवस्थापक ल्यु विबिंगले रेडमी नोट ९ सिरिजमा जडित क्यामेरा हालसम्मकै सर्वोत्कृष्ट हुने संकेत गरेका छन्। यसअघि पनि लिक भएको रिपोर्टमा पनि यो नयाँ स्मार्ट फोनमा १०८एमपी एचएम२ लेन्स हुनेछ। विबिंगले नयाँ स्मार्ट फोनको...
पुराना आईफोन ढिलो बनाइदिएको आरोप खेपेको एपल कम्पनीले उक्त विवाद टुङ्ग्याउन ११ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर तिर्ने भएको छ। अमेरिकाका ३३ राज्यले प्रयोगकर्ताहरूलाई नयाँ आईफोन किन्न बाध्य पार्न एपल कम्पनीले पुराना साधन सुस्त बनाइदिएको दाबी गरेका थिए। सन् २०१६ मा लाखौँ प्रयोगकर्ताहरूले आईफोन सिक्स, सेभन र एसईमा समस्या खेपेका थिए। त्यसलाई...
काठमाण्डौ । यसपालिको तिहारमा अनलाईन किनमेल अनलाईन भुक्तानी माध्यमको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न एनसीएचएलले एनआइसी एसिया बैंकसँग सहकार्य गरी कनेक्ट आइपीएस डिजिटल किनमेल अफर ल्याएको छ । यस अफरअन्तर्गत बैंकका ग्राहकहरुले ठूलो डटकम तथा कल्पमार्टबाट अनलाईन किनमेल गरी कनेक्ट आइपीएसमार्फत भुक्तानी गर्दा प्रति कारोबार १५ प्रतिशत(अधिकतम...